Product Innovative IPX7 Waterproof Vibration Bullet 9 haingana sy lavitra
Oh wow mamintina azy fotsiny. Faly be aho fa nandidy ity entana ity fa tsy tonga tamiko ara-potoana fotsiny izy io fa nanitsikitsika lil ny efitrano fandriana. Mora be ny mampiasa azy, gaga aho amin'ny ambaratongam-pandehan'ny varotra rehetra ary tian'ny vadiko hampiasa ahy io. Tena malefaka izy ary tiako be ny loko, hentitra be izy io fa tsy henjana fotsiny ka mihetsika amin'ny vatako ary tiako io fahatsapana io.
G spot no anarana mety indrindra amin'izany satria azo antoka fa mahatratra ny ahy lol. Maniry aho fa misy bebe kokoa toa izao tiako ho betsaka. Ny hany zavatra banga tsy hitako dia mieritreritra aho fa milay raha mamirapiratra amin'ny maizina na miova loko.
Tsy hivarotra ny ahy ho an'izao tontolo izao aho fa nahita kilalao ihany izaho sy ny vadiko tiako ampiasaina. Tena tsotra ny manadio koa. Mieritreritra aho fa mila manafidy kilalao bebe kokoa amin'ity orinasa ity ary mahatalanjona ny mpivarotra fa tsy lafo sy sandry ary tongotra toy ny kilalao maro voaraiko taloha
Item No. Rocket TL-B03
famaritana Fampiasana azo ovaina lavitra tsy misy tariby
ara-nofo ABS sy silika fitsaboana
Loko Mainty / Mena, azo ovaina
Fonosana fonosana boaty miloko, namboarina
Bateria Batterie li-rechargeable 3.7V / 200mAh
Fotoana hiasana 1.5h
Size 73mm (L) * 35mm (W) * 30mm (H)
Mode 9 hovitrovitra mafy
Karazana Remote fanaraha-maso anal bongo plug lehilahy kilalao firaisana ara-nofo
Max tabataba Latsaky ny 40dB
FANOMEZANA T / T, Western Union ary Paypal
1.Anatomika tonga lafatra sy tsara tarehy estetika amin'ny famolavolana 2.The Rocket Bullet dia natao hifanaraka amin'ny kilalao sy kojakoja rehetra
3.Motera matanjaka sy bateria azo averina 4.9 fanovana mahery vaika dia afaka mamerina climaxes clarazy sy fivaviana mamelombelona
5.Faterana haingana mandritra ny ora maro amin'ny fahafinaretana
Teo aloha: Volavola vaovao tsy misy tariby filalaovana firaisana an-tariby mini atody mihetsiketsika Clitoral vibrator massager balafomanga
Vehivavy kilalao fanaovana firaisana ara-nofo tsy azo ampiasaina tsy misy tariby vehivavy ...
Fanamafisam-peo fanatanjahan-tena vehivavy mahery vaika ...
Fivarotana mafana fivarotana TPE Big Penis goavam-be D ...
Vehivavy fananahana aorian'ny fiterahana Vagina manao firaisana ara-nofo T ...